SimpleScan dia rindranasa vaovao handefasana antontan-taratasy | Androidsis
CamScanner na Genius ny fampiharana roa mahatalanjona handinihana ireo karazana antontan-taratasy ary ento any amin'ny finday avo lenta amin'ny endriny tadiavintsika izy ireo, ary afaka mamadika azy ireo ho rakitra PDF. Amin'ny alàlan'ny fananana fakan-tsary avo lenta, ny findaintsika dia lasa fitaovana matanjaka be ho an'ity lafiny fanovana antontan-taratasy ity.
Fampiharana iray hafa izay nipoitra niaraka tamin'io fampiasa io ihany dia ny SimpleScan. Raha misy zavatra miavaka amin'i SimpleScan, dia ny ho fampiharana mora be ampiasaina ary tsotra tsy misy fanfarefotra izay manasarotra ny fampiasana azy. Ny app dia manadihady antontan-taratasy ary mandamina azy ireo ho azy. Ary na dia manana kinova maimaimpoana aza izy io dia manana kinova Pro manala ny mari-drano falifaly.
1 Ny fahatsorana ao anaty fampiharana iray hijerena antontan-taratasy
2 Ireo antontan-taratasinao ao anaty rahona
Ny fahatsorana ao anaty fampiharana iray hijerena antontan-taratasy
SimpleScan dia scanner fakantsary, izay midika fa misy antontan-taratasy azo scanina rehefa maka sary. Ity app ity dia afaka mamadika sary efa misy ho PDF aza efa voatahiry amin'ny telefaona na takelaka.
Misy fitaovana maro ananan'ny mpampiasa raha ny amin'ny fanodikodinana ny sary ary avy eo mamadika azy ho PDF. Avy amin'ny inona ny sary vongana ho setrany preset mba hisehoany ho toy ny antontan-taratasy notarafina na nesorina fotsiny ny loko avy amin'ilay sary.
Ireo antontan-taratasinao ao anaty rahona
Toy ny CamScanner has the fahaizana mampakatra antontan-taratasy notarafina tamin'ny rahona na mizara izany amin'ny alàlan'ny serivisy hafa. Azonao atao ny mampiasa Google Drive, Dropbox na karazana fampiharana hafa amin'ny fitehirizana rahona.
Mamela ihany koa i SimpleScan manondrana antontan-taratasy amin'ny endrika samihafa toy ny sary, PDF na koa ny ZIP ho an'ny antontan-taratasy izay misy pejy maromaro. Ny iray amin'ireo hatsarany dia ny fanitsiana ny PDF momba ny kalitao, ny orientation na ny marbit.
Ny fampiharana dia misy kinova maimaim-poana araka ny nolazaiko, fa ny kinova Pro dia mamela anao hanaisotra ny mari-drano amin'ny 0,88 €. Fampiharana mahaliana iray izay mampiasa ny fahatsorana sy ny fampiasana mora ampiasaina hanavahana ny tenany amin'ireo rindranasa hafa amin'ity sokajy hita ao amin'ny Play Store ity.
SimpleScan: Scanner an'ny fakan-tsary PDF
Developer: Fampiasana vatana mahasalama
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Sakano izay karazana antontan-taratasy amin'ny SimpleScan